Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Aogositra, 2008
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Aogositra, 2008
Iràna 26 Aogositra 2008
Namoaka lahatsoratra mitsikera ny governemanta any Iran ao amin'ny blaoginy i Ali Akbar Javanfekr, mpanolotsainan'ny filoham-pirenena any an-toerana. Tranga iray tsy mahazatra ao Iran izao.
Shina: Ny voasakana sy ny tsy voasakana
Hong Kong (Shina) 07 Aogositra 2008
Maro ny vohikala, tahaka ny Radio free Asia (radio afaho i Azia), no lasa azo tsidihina mandritra ity lalao olaimpika ity, na izany aza hoy i Liu Xiaoyuan dia mbola maro ny bolongana voasakana tsy ho azo tsidihina hatrany. Nofantenana hovahana fatotra noho ny fanerena politika ireo vohikala azo tsidihina fa ny...
Torikia: Voasakana ny Dailymotion
Tiorkia 07 Aogositra 2008
Tsy voasokatra hatrany Torikia hatramin'ny faharoa aogositra 2008 lasa teo ilay tranonkala fifampizarandahatsary Firantsay Dailymotion.com. Tsy misy fanazavana ny antony nanakanana ny tranonkala hoy i Erkan Saka, mpamaham-bolongana mipetraka any Istanboul.
Rosia 04 Aogositra 2008
Nodimandry ny alahady teo ilay efa nahazo ny loka Nobel Haisoratra tamin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Tangoronosin'ny golagy(The Gulag Archipelago) dia i Aleksandr Solzhenitsyn. 89 taona izy izao nindaosin'ny fahafatesana izao. Efa misy sahady ny fanehoam-pilazana ataon'ny tontolom-bolongana Rosiana, ka ity ny soratra iray avy amin'ny mpandimby ny mpanoratra dia i LJ markgrigorian.
Shina: Lisitry ny vohikala tsy nosakanana amin'ny lalao olaimpika
Shina 02 Aogositra 2008
Life 2.0 mamaham-bolongana Isaac Mao no nanangona ny lisitry [zh] ny vohikala vaovao tsy nosakanana hatramin'ny herinandro teo hanarahana ny lalao olaimpika andro mafana 2008. Maro moa no wmanontany tena hoe mandra-pahoviana izy ireo no tsy hosakanana; Mao kosa nanoratra hoe: ‘faingàna ary misoratana anarana amin'ireny ô!’
Shina: Tambajotra Viritoaly idifiana sivana
Shina 01 Aogositra 2008
Tamin'ny alalan'ny PandaPassportn'i Rick Martin tao amin'ny Facebook milaza Tambajotra Viritoaly: “Ho an'ny rehetra any Shina, ity no fanararaotra hijerenao izay tianao hojerena (ialana amin'ny sivana manjaka any). Mametraka rindrambaiko (riindrankajy) vetivety monja dia vonona ny rehetra…andramo dia ho hitanao.